WAA MAXAY SABABTA ARIGA LOOGA JOOJIYAY BIXINTA CAANAHA: SABABTA LOO YAQAAN 'MILKINESS XUN' EE RIYAHA, SIYAABAHA CAANAHA KU HABBOON - RIYO
Ariga ayaa joojiyay bixinta caanaha: sababaha iyo hababka loo tirtiro
Milkiilayaasha riyaha badanaa waxay ka cabanayaan in xayawaanku si weyn u yaraatay dhalidda caanaha ama caanaha oo dhammaystiran. Si loo fahmo sababaha hoos u dhigista dhalidda caanaha, waxaa lagama maarmaan ah in la falanqeeyo xaaladaha riyaha lagu hayo, iyo sidoo kale waxa iyo sida loo quudiyo.
Miyaa lagama maarmaan in laga cabsado dhicitaankii milkari
Rida mar walba ma siinayso isla caano isku mid ah maalintii. Ka dib dhalashada, dhalidda caanaha si tartiib tartiib ah ayaa u kordha oo gaadhsiisan heer sare marka laga hadlayo bisha shanaad ee beerashada-daaqsinka. Dheeraad ah, waxay bilaabmaysaa si tartiib tartiib ah hoos u dhig. Haddii riwaayad lagu hayo dayac tirka sanadka oo dhan (iyada oo aan daaqa lahayn), dhalidda caanuhu waa had iyo jeer isku mid ah, laakiin waxay kaloo bilaabataa inay hoos u dhacdo 4 bilood oo ka mid ah nuujinta. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in xayawaanku galaan muddada diyaargarowga ah ee la isku dardar gelinayo iyo in la siinayo carruurtoodii.
Ma taqaanaa? Riyaha waxay leeyihiin ardeyda indhaha ah. Noockan aan caadiga ahayn ee ardaygu wuxuu siinayaa guud ahaan guud ahaanba dadka iyo xayawaanka leh ardayda dhigata. Riyaha waxay arki karaan aragti dareen leh 320-340 digrii waa wax kasta oo laga reebo wixii xaq ah ee ka danbeeya. Faa'iidada ardayga leyliyuhu waa awoodi la'aanta in uu kor u kaco ama hoos u dhaco adigoon u dhaqaaqin madaxaaga.
Sababaha macquulka ah ee caanaha maqan
Marka dib loo dhigo soo saarida caanaha, jidhka riyaha ayaa loo diyaariyaa dhibaatooyinka xilliga uur-qaadidda, kaydinta walxaha caafimaadka leh iyo dufanka. Xaddiga uu soosaarka caanuhu hoos u dhaco wuxuu si toos ah ugu tiirsan yahay xoolaha. Tusaale ahaan, cayayaanka caanaha ee riyaha (Zaanenskaya) ayaa yaraaday waxsoosaarka caanaha, sidoo kale si tartiib tartiib ah ayuu u yaraaday jilicsanaanta ama hilibka liita. Dhibta caanaha ee artiodactyls ayaa si toos ah ula xiriira da'da. Waqti ka dib, isbeddel hormoon ah ayaa ka dhacda jiritaanka jimicsi, isla mar ahaantaana isbedelka qanjidhada naasaha.
Haddii dhaliddu ay bilaabato inay dhacdo, milkiiluhu waa inuu si taxadar leh u hoggaansamaa waxyaabaha saxda ah ee riyaha. Aad bay muhiim u tahay inaad siisid waqtigooda si buuxda oo si haboon u caano. Waxaa lagugula talinayaa in lagala tashado dhakhtar xoolaad iyo xayawaan xoolaad ah, waxaadna heleysaa talooyin ku saabsan xannaanooyinka xayawaanka, iyo sidoo kale tallaal joojin iyo tallaal ka hortag ah.
Sidoo kale, sababta keentay ri'yaha soo saaro caanaha yaryar waxaa laga yaabaa inuu yahay mawduuca iyo dabeecadda dharka-hoofka. Xayawaanka caanuhu waa kuwa xasilloon, oo aan ahayn feejignaan. Riyo miiran oo rujin ah ayaa aad uga sii daraya iyo farqiga u dhexeeya tirada badan. Culeysku wuxuu saameeyaa wax-soosaarkooda, sidaas awgeed caanuhu way lumaan ka dib markay farxaan sida xayawaanka sida. Marka aad iibsanayso riyaha, waxaa lagugula talinayaa inaad dooratid xayawaan leh dabeecad xasilan oo isku dheelitiran.
Ma taqaanaa? Afar qol oo qolka caloosha ku jiraa waxay ka caawisaa ari sida xayawaanka culus sida cawska iyo cagaarka. Marka hore, cuntadu waxay gashaa caleemaha, ka dibna waxay gasho qaybta labaad ee caloosha (reticulum), halkaasoo walxaha aan dheef-shiid kiimikada la kala sooco. Qaybta dambe ee qolka gastric (omasum) cunto ayaa laga soocaa biyaha, ugu dambayn, waxay gasho "calool-galka" caloosha, abomasum.
Sidoo kale, waxsoosaarka caanuhu wuxuu ku dhacaa xoolaha khaldan:
Qeyb ka mid ah masuuliyada caanaha caanaha ayaa ku jirta feedhka, wax kasta oo ka yimaada cuntada saxda ah waxay keeneysaa hoos u dhac wax soo saarka. Quudinta artiodactic waa in lagu hagaajiyaa xaalada jirka. Isku mid ahaansho isbeddel joogto ah oo ku yimaada quudinta iyo isku-dhafka cuntada ee quudinta. Isla mar ahaantaana, cuntooyinka xayawaanku badanaa waxay leeyihiin waxyaabo muhiim ah: ma jiraan wax qallalan qallalan - protein yaraanta; Lama oggola quudin, cunto hadhuudh ah - tani waa kaloori la'aan; la'aanta cusbada macdanta - xayawaanka waa in la siiyaa cusbo cusbo ah-lizunets ama lagu qasi kariyo microelements iyo fitamiino uumiinno quudin.
Cunno aan habooneyn, marka lagu daro hoos u dhigga wax soo saarka caanaha iyo yaraynta tayada alaabta, waxay si xun u saameysaa xaaladda jirka ee artiodactyls.
Cuntada caanaha iyo sunta cuntada, sidaa daraadeed ma isticmaali kartid cunto aan caadi ahayn: caleemo leh kareemo ama caarye ah, hadhuudh isku qasan ciid ama caano, dhirta sunta ah ama dhir daaweynta lagu daaweeyo sunta cayayaanka iyo geedislaha.
Biyaha ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya tirada iyo tayada caanaha la soo saaray. Haddii xayawaanka ay cabbaan biyo wasakh ah ama aaney helin biyaha oo dhan, dhaliddu way hooseysaa. Biyaha la cabbo ee artiodactyl waa in aysan aheyn mid nadiif ah, laakiin ma qabow (+ 10 ° C).
Xaaladaha ay ka kooban yihiin riyaha caanaha ayaa sidoo kale saameeya wax soo saarka caanaha. Waa wax aan la aqbali karin marka xayawaanka la dhigo jiilaalka qaboobaha qabow, halkaasoo uu yahay qoyaan iyo diyaarin, iyo xagaaga oo dhan waxay u daaqaan kulaylka saacadaha iftiinka.
Waa lagama maarmaan in la fiiriyo waxyaabaha ku jira artiodactyl. Xaqiiqda ah in ariga si joogto ah loo iibiyo waa inaysan ka hortagin in ay qaaddo caruur. Mararka qaarkood hoos u dhaca caanaha ayaa ah natiijada ka dhalan karta wax aan sax ahayn, oo aan caan ahayn. Haddii ariga aan si sax ah loo nadiifin, qayb ka mid ah caanaha ayaa ku sii jiri doona candho xoolo ah, ka dib markaad jidhka xooluhu soo saari doonto wax yar. Soo bixinta xoolaha waa in la xusuustaa in inta badan caanuhu ay si toos ah ugu xiran yihiin cabbirka caanaha iyo wax soo saarka caanaha, iyo sidoo kale xilliga nuujinta.
Ma taqaanaa? Riyaha waxay leeyihiin dibnaha sare ee mobile, kuwaas oo ka caawiya in la jeexo caleemaha casiir ka soo laamood cufan.
Xaaladaha aan la oggoleyn xilliga qaboobaha:
qolka dhexdiisa iftiin qumman;
maaha ventilated kozlyatnik;
kuleyl ama qabow;
Sababta hoos u dhaca caanuhu waxay noqon kartaa cudur ama dhaawac jireed. Si aan u seegin calaamadaha ugu horreeya ee qulqulka, mulkiiluhu wuxuu u baahan yahay inuu si taxadar leh u ilaaliyo xayawaanka: ma jiraa isbeddel ku dhaca dabeecadda iyo fayoobida, sidee quudinta u socotaa, in cuntada oo dhan la cuno. Haddii ay caddaato in xayawaanku jiran yahay, wac dhakhtarka xoolaha ama dhakhtarka xoolaha. Dhakhtarka xoolaha ayaa kuu qori doona daaweyn kuuuna kuu sheegi doonaa sababta caano yaraanta riyaha iyo sida loo soo celiyo dhalidda caanaha.
Xaaladaha badankood, mastitis waxay ka bilaabantaa qaab shakhsiyeed. Ma jiraan calaamado cad cad, laakiin bilawga cudurka ayaa laga shakisan karaa sababtoo ah hoos u dhaca soo saarista caanaha, sababtoo ah isbeddelada burburku waxay ku dhacaan unugyada qanjidhada. Lama yaraatee wax yar oo naaso qarsoon oo qarsoon - tayada caanaha naaska ayaa sii xumaatay waxayna yaraynaysaa nolosha shelf. Naas-nuujinta subagga ah waxaa lagu go'aamiyaa oo kaliya natiijooyinka imtixaanka.
In xayawaanka jirran, dhalidda si tartiib tartiib ah hoos u, inta badan qaybta afaraad ee dhalidda caadiga ah. Isbedelka caanaha, isbedelka saliidda ayaa ka muuqda.
Marka laga hadlayo mastitis catarrhal, hoos u dhaca cufnaanta caanaha ayaa la arkay - waxay noqoneysaa biyo, si fudud u qaybsan jajabyada (biyaha iyo dufanka). Barar saafi ah waxaa weheliya suuxinta ama dhiigga caanaha.
Ibtaamadu sidoo kale way isbeddelaan, maqaarku wuu ka soo horjeedaa xanaaq badan. Badanaa xiniinyaha xinjirta ibta.
Sameynta caanaha ma aha oo kaliya dhibic culus, laakiin ka dib 2-4 maalmood nuujinta si buuxda u joojin kartaa.
Xayawaanka waxaa loo arkaa niyadjab, xaalad xanuun iyo qandho.
Naaso fareemka ah ayaa inta badan ku soo noqda dhuunta. Qeybta bukaanku waa mid aad u ballaaran, xanuun badan, oo kacsan. Maqaarka candhuufta ayaa barara, casaan iyo kulul, qanjidhada qanjidhada ayaa si cad u muuqda.
Poultices, boomaatada iyo alaabta kale ma aha mid ku habboon daaweynta naaso. Cudurka waxaa lagu daweeyaa oo kaliya antibiyootiko.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sababaha iyo daaweynta naaso riyaha.
Xayawaanka ayaa waxyeelayn kara daaqa, tusaale ahaan, si ay u xirtaan burqashada waxayna si weyn u waxyeeleeyaan maqaarka candhuufta. Sidoo kale maaha wax aan caadi ahayn in lagu dagaalamo riyaha riyaha, ka dibna waxaa jira dhaawacyo ka imanaya geesaha, hoofyada, iyo qaniinyada ilkaha. Si looga hortago tani inay dhacdo, milkiiluhu wuxuu u baahan yahay inuu daawado xoolaha ariga iyo xayawaanka gaar ahaan xayawaanka iyo xayawaanka dufanka leh.
Waxaa lagama maarmaan ah in la qaboojiyo riyaha dhaawacan, si tartiib ah u qabato, ka dibna si taxadar leh u baaro meesha dhibta ah. Haddii aysan jirin wax khatar ah, nabarka waa in lagu mayraa biyo, ka dibna lagu buufin karaa peroxide oo isticmaal faashad leh boogta bogsashada boogaha ama lagu rusheeyaa streptocide. Marka la helo dhaawacyo halis ah xayawaanka, waxaa lagugula talinayaa inaad ku martiqaadato dhakhtar, waxaad u baahan tahay daaweyn caafimaad.
Xayawaankii dhaawacmay ayaa si ku-meel-gaar ah loo go'aamiyay xoolaha. Dib u soo kabashada ka dib, artiodactal ayaa dib loogu celiyaa riyaha.
Ku xadgudubka xaaladaha xabsiga
Dhibaatooyinka caanaha iyo jiritaanka cudurada waa laga ilaalin karaa iyadoo la ilaalinayo xeerarka aasaasiga ah ee nadaafadda iyo daryeelka xoolaha. Ariga waa in lagu hayaa xaalad ku haboon: qol nadiif ah oo qallalan (oo aan bilaash ahayn), cunto ah oo ka kooban quudin fiican (silfil xumo, oo xad dhaaf ah ayaa noqon kara dhimasho).
Beeralayda yaryar (gaar ahaan xilliga jiilaalka), quudinta hal nooc oo quudin ah ayaa inta badan la dhaqmaa ilaa ay ka dhammaanayso. Tusaale ahaan, xayawaanku waxay quudinayaan xididdo caloosha ilaa ay ka dhammaato, ka dibna si kedis ah loogu wareejiyo dhirta ama hadhuudhka. Ka dibna xayawaanku markiiba waxay siiyaan nooc kale oo isku mid ah cuntada. Tani waxay khaldan tahay, maadaama ay saameyn xun ku yeelato rabitaanka cuntada, xayawaanku diidaan inay cunaan ama ha cunin qaybta saxda ah. Intaa waxaa dheer, iyada oo quudinta sida riyaha inta badan ka maqan wax nafaqo ah.
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido waxa aad ku quudinayso riyaha.
Siyaabaha loo xallinayo dhibaatada
Inta badan, badinta caanaha ayaa si xoog leh u dillaacday ka dib markii isbeddel lama filaan ah ee noocyada quudinta, tusaale ahaan, marka xoolaha laga wareejiyo daaqa si ay u ilaaliyaan dhogorta, iyo sida kale. Kalluumaysatadu waxay jilcisaa xilligan, oo ay ku jiraan caanaha xilliga dayrta (beddelidda cawska cusub), quudinta guga waxaa ka mid ah cunto quudin ah si loo bedelo cawska cagaaran. Waxaa lagugula talinayaa in aad qorsheyso raashinka xayawaanka dhowr bilood ka hor, iyo dhammaadka hal ama mid kale oo quudin, si tartiib ah u yareeya tirada badan iyada oo la isticmaalayo alaabta kale.
Cunto si joogto ah u keena
Si riyuhu u noqdo mid caafimaad qaba oo caano fara badan u bixiya, cuntooyinka xayawaanku waxay u baahan yihiin in lagu dheellitiro. Waa inay ku badan tahay kalooriyeyaasha, sidoo kale waxaa ku jira borotiinka, macdanta iyo fitamiinnada. Si loo yareeyo kharashka, cuntooyinkaas sida hay ", silage waxaa lagu daraa maalin kasta cuntada. Dhamaan sanadka oo dhan, marka laga reebo xilliga jiilaalka, riyaha waa in maalin walba la waraabiyaa. Xayawaankan aan qabin waxay si fiican u cuni karaan xitaa daaqsinka tayada hooseeya, waxay xitaa cunaan haramaha iyo laamaha geedaha.
Kordhinta cunto-ku-darka leh isku-darka badarka ayaa muhiim u ah bixinta kalooriyo dheeraad ah iyo borotiin, gaar ahaan xilliga nuujinta. Wax isku darka ah waxaa ku jiri kara isku-dar ah macdan iyo fitamiino. Cunto quudashada waa in la yareeyo, sababtoo ah cunto diiriyaal ah oo leh qadar yar oo dheef-shiid kiimikaad hooseeya waxay keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad darro ah (tusaale ahaan, caloosha, acidosis) iyo subaga yar ee caanaha. Nafaqada sare ee nafaqadu waxay muhiim u tahay dhalidda sare, halka borotiinka iyo fiber ay saameeyaan tayada caanaha.
Quudinta badanaa kuma jirto macdano ku filan, waxaana loo baahan yahay dhammaystir. Si arrintan loo sameeyo, isticmaal iskudarka macdanta ee cusbada leh calcium, fosfooraska iyo xubno raad. Digirta (tusaale, alfalfa, dhir) waxaa ku jira qadar ku filan oo ah kalsiyum, marka lagu daro fosfooraska keliya ayaa lagu daraa.
Haddii daaqsigu yahay meesha ugu muhiimsan ee cuntada, ka dibna fitamiinada dheeraadka ah ma aha kuwo muhiim ah. Haddii aad isticmaasho haad ama silage, waxaad u baahan tahay fitamiin dheeraad ah (A, D, iyo E).
Marka la dooranayo qiyaasaha cuntada, waa in la xasuusnaadaa in cuntada ay tahay inay dabooli karto baahida xayawaanka muddo cayiman (dhalmo farabadan, nuujin fara badan, diyaarinta taranta).
Waa muhiim! Caanaha roodhku wuxuu leeyahay sifooyin badan oo ka dhigaya wax aad u qiime badan. Qaab-dhismeedkooda iyo halabuurka waxay u oggolaanayaan in loo isticmaalo beddelka caanaha lo'da ee cuntada ilmaha, ee loogu talagalay dadka xasaasiyad ku leh lactose, iyo sidoo kale dadka isdaba-joogga ah iyo waayeelka. Cheese iyo yoghurt waxaa laga sameeyaa caanaha riyaha.
Cabbitaanka saxda ah
Nuujinta riyaha caanuhu wuxuu soconayaa ilaa 300 maalmood, inta lagu jiro xilligaas xayawaanku wuxuu soo saaraa inta u dhexeysa 60 iyo 3000 kg oo caano ah. Miisaanka wax soo saarku wuxuu ku xiran yahay inta ugu badan ee ku saabsan taranka iyo heerka nafaqada.
Riyaha waxaa lagu iibiyaa gacanta ama isticmaalaya mishiinada iibinta. Caanuhu wuxuu soconayaa celcelis ahaan 6-7 daqiiqadood, dhalidda hal mar oo caano ah waxay ku saabsan tahay 2 litir. Dareemidda caawinta mishiinka qaadashada waxay qaadataa 3-4 daqiiqadood.
Si riyaha si wanaagsan loo caano qabo, waxaa muhiim ah in la hubiyo raaxada xayawaanka iyo yaraynta diiqada inta lagu jiro caanaha. Xalka ugu fiican waa in la dhiso xayndaab caano leh oo riyaha ku haynaya isla booska.
Iridda hore ee laydhka, waxaa lagu rakibay saxar cunto, kaas oo ariga (inta lagu jiro caanaha) ay cuni karaan. Sidaa daraadeed, xannaanada inta lagu jiro caanaha waa mid mashquul ah cunista mana fiiriyo hawlaha bini'aadamka. Isla mar ahaantaana, milkiiluhu wuxuu si buuxda u xakameyn karaa qaadashada raashinka xayawaanka. Dawooyinka, macdanta ama fitamiinada ayaa la siin karaa riyaha oo ay weheliso quudinta.
Caadi ahaan, riyaha waawayn ayaa caanaha laga helaa ugu yaraan laba jeer maalintii, iyaga oo soo saaraya caano badan oo subaxdii ka badan habeenkii. Waa in maskaxda lagu hayaa ku tiirsanaanta xaddiga caanaha ma aha oo keliya waqtiga maalinta, laakiin sidoo kale xilli-ciyaareedka. Guga iyo bisha Juun, ariga ayaa siinaya caano badan subaxdii (30-40%) marka la barbardhigo caanaha habeenkii, iyo nuska labaad ee xagaaga ilaa Sebtembarka farqiga caanaha caanuhu waxay noqdaan kuwo aad muhiim u ah (60-75%).
Waa muhiim! Hilibka riyaha wuxuu ka kooban yahay borotiinka iyo macdanta macdanta badan marka loo eego idaha ama lo'da, iyo sidoo kale dufanku yar yahay.
Waa maxay sababta caanaha ka dib lambarka
Mararka qaar waxay dhacdaa marka dhalashada riyaha, caanaha riyaha ay gebi ahaanba ka baxeen ama yar yihiin. Waqtiga dambe ama ka dib, waxsoosaarka xoolaha ayaa wajihi kara dhibaatadan.
Sababaha macquulka ah:
ka dib markii wanaajinta, candho xoolo xun ama si aan sax ahayn u kala qaybsan;
horumarinta naaso ka dib dhalashada;
naagtuna aragga ma ay oollin geedihii wadaadka hortiisa,
la'aanta feedka succulent (xididdo, bocorka, baradho ceeriin);
Dhibaatooyinka dhalmada kadib.
Sidaas awgeed dhibaatooyinkaasi ma dhicin, ka dib marka ay farcanku u muuqdaan kaarbarka, dhirtu waxay u baahan tahay inay si habboon u qaybiso candho xoolo. Cuntada mustaqbalka caanaha mustaqbalka, waxaa muhiim ah in la daryeesho dambarka suunka candho xoolo ah inta lagu jiro saacadaha ugu horreeya ka dib lambarka.
Waxay dhacdaa in caruurtu diidaan caanaha naaska, maadaama ay qaadato dhadhan qadhaadh. Qadhaadhka caanaha waxaa lagu sharxi karaa xaqiiqda ah in riyadu cunaan laanta guntada ama qoryaha, taas oo saameeya dhadhanka alaabta.
Marwalba waxaa jira sababo wanaagsan oo keena dhibicda caanaha. Tani waxay noqon kartaa cudur ka mid ah candho xoolo, quudin ku filan ama aan haboonayn, oo ku guul daraysatay in uu u hoggaansamo shuruucda ilaalinta xayawaanka. Marka ay sababto hoos u dhaca nuujinta ayaa la go'aaminayaa, waxaad go'aamin kartaa waxa la sameeyo si loo saxo xaaladda.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Riyo 2020